Jabsiga: Ma aha oo kaliya in aad wax ka sii fiicnaato laakiin inaad si fiican wax uga fikirto | Laga soo bilaabo Linux
Laga soo bilaabo maqaalkeenii hore ee la xiriira mowduuca «Hacker» loo yaqaan «Dhaqdhaqaaqyada La Xiriira: Haddii aan isticmaalno Software-ka Bilaashka ah, innaguna ma waxaan nahay Hackers?»Kaas oo aan uga hadlayno Waa maxay Hackers? oo waxaan si kooban u soo bandhignay asalka dhaqdhaqaaqa hadda jira, ujeedooyinkiisa, muhiimadiisa iyo isku ekaanshihiisa ama xiriirka uu la leeyahay Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah, Waxaan si sahal ah uga soo saari karnaa fikirka soo socda ee soo socda "Hacker wuxuu sameeyaa waxyaabo ka fiican kuwa kale sida uu karti u leeyahay maxaa yeelay wuxuu uga fikiraa sida ugu fiican ugana duwan run ahaantii.
Hackers ma aha oo kaliya inay sameeyaan wax fiican ama waxyaabo la yaab leh, taas oo ah, ma aha oo kaliya inay xalliyaan dhibaatooyinka iyo / ama ay dhisaan waxyaabo cusub ama xagjirnimo ah oo kuwa kale ay u arkaan wax adag ama aan macquul ahayn, laakiin markay sameynayaan waxay u fikiraan si ka duwan celceliskaTaasi waa, waxay ku fikirayaan "xorriyadda, madax-bannaanida, amniga, asturnaanta, iskaashiga, isu-ururinta." Haddii aad rabto inaad noqoto Hackers, waa inaad u dhaqanto sida lagu faray falsafadan nolosha, ku qaad dabeecadaas dhexdeeda, kana dhig qayb muhiim u ah jiritaankaaga.
2.1 Maskaxdeena jabso
2.2 Jabsiga farsamooyinka iyo macluumaadka aan cunno
Laakiin haddii aad ka fikirto inaad kobciso dabeecadaha "Hacker" gaar ahaan haddii aad tahay "Jacaylka Barnaamijka Bilaashka ah" mid ahaan horumarineed ama isticmaale ahaan, si uun aad ku kasbato aqbalaada aduunka aad ka shaqeysid, waad khaldameysaa.
Sameynta iyo u fikirida sida Hacker-ka, noqoshada nooca qofka aaminsan in wax badan ama wax walba la horumarin karo lana wanaajin karo, iyo inuu sameeyo wixii awooddiisa ah si uu waxyaalahan ugu suurta geliyo waxtarka dadka intiisa badan, waa wax ay tahay inay noogu adeegto marka ugu horreysa si ay wax u bartaan una dhiirrigeliyaan, oo noo oggolaadaan inaan caawino kuwa kale.
Sidaa darteed, sida ugu wax ku oolka badan ee macallin lagu noqdaa waa ku dayashada maskaxda macallimiinta, ma ahan oo keliya caqli ahaan, laakiin sidoo kale shucuur ahaan. Marka maskax furan akhriska / qorista mowduucyada aan dhammaadka lahayn ee ka imanaya aragtiyada kala duwan, fikradaha kala duwani ama iska soo horjeedda, soo-jeedinnada aan macquul ahayn ama aan caadiga ahayn iyo fikradaha ayaa lagama maarmaan u ah in la helo ruux Hacker ah.
Waa inaan wax kaaga digaa. Caado xun ayaan u leeyahay ka fikirida su'aalaha intaanan ka jawaabin. David Perkins, oo ah borofisar sare oo waxbarashadda ka dhiga Harvard, khabiirna ku ah barashada, fahamka iyo hal-abuurka.
Maalin kasta, dadku waxay u muuqdaan inay leeyihiin fikrado badan oo wanaagsan iyo kuwa badan oo aan fiicnayn. Tani waxay nooga tagaysaa meel ballaadhan oo nolosha ah si aan ugu aadno jiho qaldan innagoo aan si fiican uga fekerin macluumaadka aan ka cunno qaybaha kala duwan ee nolosha: go'aannada shaqsiyeed, mowqifyada siyaasadeed, cilaaqaadka aadanaha, fikradaha falsafad iyo mowqifyada diimeed.
Xaqiiqdu waxay tahay in adduunku yahay meel cakiran oo dadku inta badan sabab uga dhigaan mowduucyo kala duwan, hab aan ku filnayn habka macluumaadka loo abuuro, loo gudbiyo loona qaabeeyo fartayada. Dadku waxay u muuqdaan inay ka fekeraan macluumaadka mawduucyada la cunay si ay had iyo jeer u tiigsadaan oo ay u janjeeraan xagga aragtida horay loo sii qorsheeyay ee isla macluumaadka, taas oo markaa xoojinaysa fikradda ah "is-khiyaanaynta in lagu farxo."
Taasi waa dadka u muuqda inay ku faraxsan yihiin fikrad gaar ah ama mowduuc waxay u muuqdaan inay helaan ama si fudud si fudud u helaan macluumaad xoojinaya fikraddaas ama mowduucaas, taas oo, haddii ay noqoto fikrad khaldan ama maaddo la maareeyay, ay si joogto ah u xoojiso aaminaadda beenta ah ee ay ku dhex jirto dareen aan run ahayn oo farxad ah.
Dhacdadan awgeed, tallaabada wanaagsan waa inay noqotaa "In la jajabiyo maskaxdeenna", si kale haddii loo dhigo waa inaan "is-tababarno" si aan wax uga qabanno wejiyada kala duwan ee fikrad, mowduuc ama xaalad. Iskuday inaad nafsadeena udhigto dhanka kale ama dhanka kasoo horjeedda ee fikirka, mowduuca, xaalada ama kooxda. Isku day inaad nafsadeena u soo bandhigto baaritaanka, riwaayadaha u soo bandhig xitaa haddii ay macquul tahay. Si loo soo jeediyo in la helo ka xeel-dheer caqliga caqliga ku saabsan waxyaabaha inagu xeeran.
Inta udhaxeysa laba ikhtiyaar, dooro tan saddexaad. David Perkins
Su'aal ka taagnaanshaha kalsoonida ilaha macluumaadka aan cunno, isticmaal badiyaa fikirka "Sanduuqa Ka Baxsan" (Sanduuqa Ka Baxsan), ka tag fikradaha ma guuraanka ah, aan khaldami karin iyo weligood, taas oo guud ahaan u muuqata mid ka mid ah Dhaqaalaha - Siyaasadda - Nooca Diinta ”, farsamooyinka ka mid ah kuwa kale ee naga caawiya inaan maskaxdeena ugu furno karti iyo fursado cusub oo aan la baarin.
Barashada in si fiican loo fikiro waxay naga caawineysaa inaan ku guuleysano yoolalka aan higsaneyno. Xeeladdu waa ogaanshaha sida ugu wanaagsan ee loo go'aansado halka aan ku maalgelin lahayn fikradeena iyo dadaalkeenna badan, iyadoo loo xaglinayo xallinta iyo faa'iidooyinka wadajirka ah halka mid ka mid ah lagu daro, oo aan ahayn halka uu qofku keligiis yahay ama ka-faa'iideystaha ugu weyn. Taasi waa meesha aan u baahanahay inaan ka caqli badnaano markay tahay fikirka.
Jabsiga farsamooyinka iyo macluumaadka aan cunno
Adduunyada leh xog intaa le'eg, warbaahinta waaweyn iyo shirkadaha tiknoolajiyada ayaa si dhakhso leh u fahmay inay jiraan hal shay oo mudan oo keliya: fiiro gaar ah. Tristan Harris, shaqaalihii hore ee Google.
Shirkadaha Teknolojiyada (Internetka, Kumbuyuutarrada, TV-ga, Mobiles-ka, Shabakadaha Bulshada iyo Macluumaadka / Isgaarsiinta) waxay ku saleeyaan guusha dhaqaale ee moodelladooda ganacsi iyagoo afduubay dareenka dadka isticmaala isla markaana qaabeynaya dhaqankooda iyo fikirkooda. Hadafkaaga: Ku hay dadka inta ugu badan ee suurtogalka ah adoo isticmaalaya oo cunaya alaabadaada, waxyaabaha ku jira iyo macluumaadkaaga. Sababta Lacag iyo Awood.
Diiradeena diiradeena waa albaabka ay kuwa kale (Shirkadaha Teknoolajiyadda iyo Siyaasiyiinta, iyo kuwa kale) ay ka galaan adduunkeena gudaha, maskaxdeenna, shucuurteenna, dareenkeenna iyo xitaa go’aamadeenna. Dhammaantood waxay u tartamayaan inay ku xirnaadaan. Waqti kasta oo leh habab wax ku ool ah, oo naga dhigaya kuwo la qabatimay ilaha macluumaadka iyo qanacsanaanta degdegga ah, inaga soocaya bini'aadamka kale iyo deegaankeenna dabiiciga ah.
Noqoshada dulqaad yaraanta jahawareerka, u qabatimay dareenka aqbalaadda iyo oggolaanshaha, taasoo noo horseedaysa inaan horumarinno fikradaha xunxun, oo ku saleysan xaqiiqooyinka muuqda ee ku soo ifbaxaya bey'adaha bulshada ee caadiga ah.
Taasi waa sababta jabsadaha loo yaqaan 'Hacker' ay sidoo kale uga dhigan tahay "inaad si fiican uga fikirto" Fikirka wanaagsan ee ku lug leh ka fogaanshaha in la fara xumeeyo, la qanciyo, iyo / ama la abaabulo adoo fooraraya rabitaankeena, iyada oo loo marayo dhexgalka anshaxyada, shucuurta ama jawaabaha ay rabaan kuwa kale, iyada oo aan kaqeyb galeynin, isticmaalka xukunkeena muhiimka ah.
Ka fakarida sifiican, horumarka fekerkiisa xasaasiga ah ee qofka, ayaa inta badan ka hortaga khalkhalgelinta ama is-khiyaaneynta. Is-baraarujinta meesha aan diiradda saarno feejignaanta waa cunsur muhiim u ah maskaxda Hacker. Feejignaanta ayaa ah marinka geedi socod kasta oo qancin iyadoo fikirka xasaasiga ahi yahay aalad noo ogolaanaysa inaan ku takoorayno macluumaadka aan ku helno qaab kasta. Sidoo kale ku baraarugsanaanta garashada garashada ee aan u nimid waxay noo oggolaan kartaa inaan gaarno go'aanno mas'uuliyad dheeri ah leh.
Waxay umuuqan kartaa madadaalo badan inaad ahaatid Hackers, Sameynaya waxyaabo Hackers-ku sameeyaan, U fikir sidii Hacker, laakiin runtu waxay tahay ahaanshaha, sameynta iyo u fikirka sida Hacker waa nooca madadaalo ee u baahan dadaal badan iyo dhiirigelin. Hackers waa inuu dareemo ama dareemo nooc gudaha, dabiici ah, raaxo dabiici ah markuu xaliyo dhibaatooyinka, xurmeeyo xirfadahiisa, adeegsado caqligiisa, su'aalo ka weydiiyo xaqiiqadiisa isla markaana uu had iyo jeer ku khilaafsan yahay waxyaabaha muhiimka u ah adduunka haatan jira, nidaamka, oo dadka kale u muuqdaan inay noqdaan aan muuqan ama aan muhiim ahayn, ama ka xun, daa'in wanaagsan, ku habboon, ama siyaasad ahaan sax ah.
Waxyaabo kale oo badan ayaa u muuqda inay ku sifoobaan shakhsiyadda Hacker, sida ay u tahay "Anti-System"Laakiin shaqo adag iyo u heellan waxyaalaha ay jecel yihiin badiyaa waxay isu beddelaan nooc ka mid ah ciyaar adag, oo maahan wax caadi ah, iyaga. Dabeecaddaas ayaa muhiim u ah noqoshada Hackers.
Waxaan rajeyneynaa daabacaadan «Toos in Jabsadaha uu qof walba gudaha ku jiro» waxaan rajeyneynaa inaan wax weyn u qabanno dadka kale badiyaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Jabsiga: Kaliya maahan inaad wax sifiican u sameyso laakiin inaad sifiican uga fikirto waxyaabaha
Bilowga usbuuca $ -> Farax_Hacking
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad jeceshahay, waana ku mahadsan yahay faalladaada wanaagsan.
Bloggers: Xirfadlayaasha Mustaqbalka. Kuwa kale oo badan!